Shipping Supervisor Archives - Glory Assumption Space
Shipping Supervisor – Female (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
1.	Shipping Supervisor – Female (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ။ •	University graduate. •	have5years and above garment factory related experiences. •	have good knowledge about garments related custom regulations, documentation for both import and export, REX system,...etc. •	able to communicate between oversea office, factories and custom broker for import, export process. •	computer skill- microsoft word, excel, email, ERP. •	good in communication. •	4 skill English & Mandarin. •	able to manage team work. •	good in problem solving. •	Mon ~Fri (8:00~ 4:30) regular, (5:00~7:00) OT •	Sat (8:00~12) regular, (12:30 ~ 4:00) OT GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ Garment Factory Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101 , 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။